नेपाल प्रहरीका २९८ जना हवल्दार सहायक निरिक्षकमा बढुवा, को को भए बढुवा ?
काठमाडौं । बैशाख २९ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका २९८ जना हवल्दारको आज प्रहरी सहायक निरिक्षकमा बढुवा गरेको छ । महानिरिक्षक सर्बोन्द्र खनालले नियुक्तिसंगै लामो
टवाईलेटमा लडेर सभामुख गम्भीर घाइते, आइसीयुमा उपचार हुंदै
काठमाडौं । बैशाख २९ । शौचालयमा लडेर प्रदेश नं ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी गम्भीर घाइते भएका छन् । शुक्रबार आफनै निवासको बाथरुममा लडेर अघिकारी घाइते
समाजवादी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी कांग्रसका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रहरीले शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको छ । महासचिव गोबिन्द निरौलाका अनुसार थापागाउँको कार्यालयमा बसिरहेका बेला प्रहरीले केन्द्रीय सदस्य पार्वती थापालाई
सिन्डिकेटविरुद्ध लेख्ने पत्रिकानै बोक्न छाडे गाडीले !
धरान : गाडीले सुनसरीको धरानबाट पहाडका लागि पत्रिका बोक्न छाडेका छन्। सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको समाचार लगातार लेखेको भन्दै यातायात व्यवसायीले धरानबाट पहाडी जिल्ला पठाइँदै आएका
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आज बिहानै मुक्तिनाथ दर्शनका लागि प्रस्थान, यस्तो छ मोदीको आजको कार्यतालीका
काठमाडौं । बैशाख २९ । दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहनुुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज बिहान मुक्तिनाथ दर्शनका लागि प्रस्थान गरेका छन् । विहान
मोदी भाषणमा अब्बल लेखाईमा कम्जोर ! जनकपुरधामको आगन्तुक पुस्तीकामा के लेखे मोदीले ? (हेर्नुस मोदीको अक्षर)
काठमाडौं । बैशाख २८ । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले काठमाडौंमा छन् । आज बिहान भारतीय बिशेष बिमानबाट जनकपुर आएका मोदी
नेपाल प्रहरीका ४५ डिएसपीको सरुवा, कस्को सरुवा कहाँ ?
काठमाडौं । बैशाख २८ । नेपाल प्रहरीका ४५ डिएसपीको सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज उनिहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवाको पहिलो नम्बरमा डिएसपी
काठमाडौं । बैशाख २८ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमणका कारण बीच बाटोमा नेपाली पर्यटकहरुको बिचल्ली भएको छ। मोदीको भ्रमणका कारण सर्वसाधारणलाई मुक्तिनाथ आवत जावतमा दुईदिन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हेर्नेको भीड नियन्त्रण गर्न लाठीचार्ज
काठमाडौं, २८ वैशाख । जनकपुरधाममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन समारोहमा सहभागी हुनेहरुको घुइँचो अत्यधिक भएपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गर्नुपरेको छ । रंगभूमि मैदान प्रवेशस्थल साँघुरो भएकाले
पूर्वराजा पनि निस्के तरार्इ भ्रमणमा, यस्तो छ कार्यक्रम!
काठमाडौं, २८ वैशाख । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बारा जिल्लाको भ्रमणका लागि निस्कने भएका छन् । पूर्वराजा शाह वैशाख ३० गते सिमरा जाने तयारी गरेका हुन् ।
काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता सुविधामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई झन्डै ६ अर्ब
“द ब्रिटिस कलेज “काठमाण्डौको बेलायती सांसदहरुद्वारा अवलोकन
काठमाडौँ । ब्रिटिस ग्रुप अन्तर संसदीय संघ (बीजीआईपीयु) का प्रतिष्ठित ९ सदस्यहरुले थापाथली काठमाण्डौमा संचालन रहेको ब्रिटिस कलेजको अवलोकन गरेका छन् । ब्रिटिस ग्रुप अन्तर संसदीय संघ
काठमाडौं । बैशाख २८ । काठमाडौं : संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल को आन्तरिक अवस्था ‘भद्रगोल’ बन्दै गएकोे छ। भद्रगोल अवस्थाकै कारण जनताबीच
काठमाडौं : साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा मुछिएका डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलासहित ११ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा छानबिन कारवाही अघि बढाउने भएको छ। जिल्ला सरकारी
काठमाडौं । बैशाख २८ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आज शुक्रबार समापन हुंदैछ । काठमाडौंको वल्डट्रेड सेन्टरमा जारी सम्मेलन मा
यस्तो छ मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमण तालिका
काठमाडौं । बैशाख २७ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी शक्रबार बिहान ९:१५ मा भारतको पटना हुँदै हेलिकोप्टरबाट जनकपुर अवतरण गर्नेछन्। अवतरणलगत्तै ९:३० मा जानकी मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने
काठमाडौं । वैशाख २७ । हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या आरोपी सीयाराम कुशवाहालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रौतहट कटहरियाका मेयरसमेत रहेका सियाराम कुशवाहालाई
काठमाडौँ, २७ वैशाख । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा इटहरीका तीन स्थानीयविरुद्ध २५ बैशाख गते किटानी जाहेरी परेको छ । इटहरी–५ का सन्तोष अधिकारी,
जानकी मन्दिरमा सर्वसधारणलाई प्रवेश निषेध
काठमाडौं । वैशाख २७ । जानकी मन्दिरमा सर्वसधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार जनकपुर आएर दर्शन नगरुन्जेलका लागि जानकी मन्दिरमा सर्वसाधरणलार्य प्रवेश
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रममा केन्द्रको बजेट विनियोजन नहुने
काठमाडौं । वैशाख २७ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर आगमी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस
सुन तस्करीका अधिकंसलाई अदालताबाटै छुटाउने योजना, आरोपीतको बयाननै फेरीयो
काठमाडौं । वैशाख २७ । ३३ किलो सुनकाण्ड बाहिर चर्चामा रहेपनि भित्र भित्र भने खेल अकैं भइरहेको छ । सुनकाण्डको लहरो तान्दामा पहरो गर्जने स्थीति देखिएपछि
साउदीको जेलमा रहेका दुई युवकका अबिभावकलाई उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेशको आश्वासन “तपाँईका छोराहरुलाई यही ल्याएर हस्तान्तरण गर्नेछौं”
काठमाडौं, २६ बैशाख । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पनका छोरा एवम् समाजसेवि दीपेश पुनले ब्लड मनिको अभावमा साउदीको जेलमा रहेका गोरखाका कुमार पुन र रोल्पा निवासी दिलबहादुर
काठमाडौं । बैशाख २६ । गाउँपालिका केन्द्रको बिबादले दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ । गत बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपनि
भुकम्पको चार वर्ष, भारतीय सरकारले बनाउछु भनेका विद्यालय किन अलपत्र प्रधानमन्त्री मोदी ज्यू ? बुढो
नुवाकोट र दोलखामा अपाङ्गतामैत्री सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । वैशाख २६ । नुवाकोट र दोलखामा अपांगतामैत्री सामुदायीक पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । रिड नेपाल र एएसबीको सहकार्य मार्फत जर्मन टेलिकम, एडिएचको सहयोगमा तिन करोडको
Pages 564 : You are at page 443 of 564